Tag: tolo-kevitra momba ny vokatra | Martech Zone
Tag: tolo-kevitra momba ny vokatra
Hafa ny mpanjifa voalohany finday. Na dia manodidina ny telefaona findainy aza ny fiainany dia mitsangantsangana eo anelanelan'ny fitaovana sy toerana ary fantsona koa izy ireo. Manantena ny mpanjifa fa hiaraka amin'izy ireo hatrany ireo marika ary hanome traikefa manokana momba ireo teboka ara-batana sy nomerika rehetra. Ny tanjon'ny MoEngage dia ny manampy ireo marika hamakafaka, hampisaraka, handray anjara ary hanokana ny dian'ny mpanjifa. Topi-maso MoEngage Fandinihana ireo fijerin'ny mpandeha an-tany nomen'ny MoEngage manampy ny mpivarotra amin'ny fanaovana sarintany ny dian'ny mpanjifa ka
Rehefa miresaka momba ny personalization e-commerce ny mpivarotra dia matetika miresaka momba ny iray na roa ny endrik'izy ireo saingy tsy azony ny fotoana rehetra ahafahana mamorona traikefa miavaka sy manokana ho an'ny mpitsidika. Ireo mpivarotra an-tserasera izay nampihatra ny endri-javatra 4 rehetra - toa an'i Disney, Uniqlo, Converse ary O'Neill - dia mahita ny vokatra tsy mampino: fitomboana 70% amin'ny fidiran'ny mpitsidika ecommerce 300% fiakarana fidiram-bola isaky ny karoka 26 fiakaran'ny tahan'ny fiovam-po. , tsy mahomby ny indostria
Tamin'ny IRCE tamin'ity taona ity tany Chicago dia nanadinadinadina tamin'i David Brussin, mpanorina ny Monetate aho, ary resaka nifanazava tamin'ny fiovan'ny andrasan'ny mpanjifa sy ny traikefa antenain'izy ireo amin'ny mpivarotra an-tserasera na amin'ny Internet. Ny tranga momba ny maha-izy azy dia mihamatanjaka ary mety nahatratra teboka farany. Ny tatitra momba ny Ecommerce Quarterly Monetate farany teo dia mampiseho fa miakatra ny tahan'ny fihenam-bidy, mihena ny salan'isan'ny filaharana ary mihena hatrany ny tahan'ny fiovam-po.